Khilaaf soo kala dhax galay Yuusuf Dabageed iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Khilaaf soo kala dhax galay Yuusuf Dabageed iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan
Khilaaf soo kala dhax galay Yuusuf Dabageed iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in khilaaf cusub oo u dhaxeeya Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan uu banaanka usoo baxay.
Sida aan wararka ku helnay khilaafka u dhaxeeya labada masuul ayaa salka ku haya dhaqaalaha kasoo xarooda gobolka Hiiraan gaar ahaan tan magaalada Baladweyne sida loo maamulayo iyo sidoo kale sida loo qeybsanayo.
Ilo ku dhaw dhaw Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa laga soo xigtay in labada masuul isku fahmi waayeen dhaqaalaha gobolka kasoo xarooda sida ay u qeybsanayaan.
Khilaafka u dhaxeeya Yuusuf Dabageed iyo Cali Jeyte ayaana laga cabsi qabaa in sii xoogeesto uuna sababo xil ka qaadis, waxaana socda dadaalo ay wadaan masuuliyiin iyo odayaal oo lagu doonayo in khilaafka labada masuul lagu xaliyo.
Khilaafka ka dhasha maaliyadda gobolka Hiiraan ayaana ahaa mid sanado badan jiray oo marar badan sababay in Madaxda Hirshabelle iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku dhacaan xilalkana marar badan laga qaaday Gudoomiyaasha gobolkaasi.
Previous articleGuddiga KMG ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya oo si toos ah u howl galay
Next articleWafdi ka socda Kenya oo Muqdisho kusoo jeeda iyo xog ku aadan Ujeedka Socdaalkooda